Mamonjy ain'olona ny fijanonana ao an-trano: nikatona kely ny Nosy Cayman
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Mamonjy ain'olona ny fijanonana ao an-trano: nikatona kely ny Nosy Cayman
Ny Nosy Cayman dia hiatrika fanidiana ampahany hatramin'ny 7:00 hariva anio alina. “Ny fijanonana any an-trano mamonjy ain'olona” no hafatry ny governemanta.
Manome fanamarihana fampitandremana fatratra amin'ny talata 24 martsa 2020, Cayman IslandsMpitondra tarihin'Andriamatoa Governora Andriamatoa Martyn Roper sy ny praiminisitra Hon. Alden McLaughlin, nilaza fa eo am-pikatonan'ny ampahany kely ny firenena ankehitriny, aorian'ny tranga mety hiparitahan'ny vondrom-piarahamonina Covid-19 virus izay voalaza androany maraina.
Dr. John Lee dia nilaza hoe:
• Tranga 14 fanampiny no nanaporofo fa ratsy.
• Andrasana ny valiny avy amin'ny laboratoara CARPHA anio.
• Ny tranga totalin'ny voamarina dia 6 izao, anisan'izany ny fahafatesan'olona 1
• Ny tranga fitsapana vaovao dia avy amin'ny marary ao amin'ny HSA
Ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fahasalamana Dr. Samuel Williams-Rodriguez sy ny talen'ny HSA Lizzette Yearwood dia nilaza fa:
• Ankoatr'izay, mpikambana valo ao amin'ny marary ary mpikambana 14 ao amin'ny HSA dia mety nifandray tamin'ilay olona nanandramana tsara tao amin'ny HSA ary nitokana tao an-trano. Ny marary dia mbola tsy misy soritr'aretina ho an'ny COVID-19.
• Tsy manana tantaram-pitetezana ilay olona.
Nanambara ny praiminisitra fa tototry ny fangatahana fanavotana “fialofana amin'ny toerany” ny governemanta ary tsy hisy dikany ny fandehan'ny governemanta raha omena ireo fangatahana rehetra ireo fa nahazo fangatahana izahay. Ny tsirairay dia miahiahy ny amin'ny vokatra ara-toekarena amin'ny baiko hataontsika - Ny governemanta koa, fa ny vokany ara-toekarena dia tsy azo atao mihitsy, averiko indray fa tsy tokony ho zava-dehibe noho ny fiainana mihitsy.
Hitohy anio alina ny ora tsy ampoizina:
• Eo amin'ny 7 hariva ka hatramin'ny 5 maraina isan'andro no mivoaka ny curfew mandritra ny 10 andro manaraka. Hanara-maso ny arabe ireo mpandika lalàna amin'ny alàlan'ny RCIPS izay hosamborina.
• Manomboka rahampitso (Alarobia 25 martsa) ny governemanta dia hanamafy ny orinasa tsy ilaina rehetra izay hakatona ary ny mpiasa tsy ilaina rehetra dia tokony hijanona ao an-trano.
Ireto orinasa manaraka ireto dia orinasa izay mety takiana amin'ny asany ny mpiasa mandritra ny ora tsy itondrana azy ireo ary homena hetra. Tokony hanana ID an'ny orinasa sy taratasy avy amin'ny orinasa izy ireo izay manamafy ny filan'izy ireo miasa mandritra ny ora tsy fahazoana mivezivezy.
• Ny serivisy vonjy maika sy ilaina rehetra ao anatin'izany ny sampandraharahan'ny polisy sy ny fiarovana, 911, serivisy afo, sampan-draharahan'ny fonja, fibaikoana ny fadin-tseranana sy ny sisintany, departemantan'ny fahasalamana ara-tontolo iainana ary ireo mpitatitra fako ao amin'ny nosy.
• Fitsaboana vonjy taitra, ao anatin'izany ny HSA, Health City, Hopitaly dokotera, Serivisy mpamonjy voina ary ny biraon'ny dokotera rehetra.
• Ireo fivarotana lehibe, dia ny Fosters, Hurley's, Kirk's, Kirk Market ao Cayman Brac, supermarket Billy's, Tibmart Co. Ltd, Cost U Less, Pricing right, Progressive Distributors, Cayisle Enterprises Ltd, Cayman Distributors Group, Jacques Scott Group, Blackbeard's, Dadatoa Clems Distributors, Heston Ltd, Maedac Supply Ltd, MacRuss Superstore, Chisholms Supermarket
• Banky fivarotana rehetra
• Fitaovana sy fotodrafitrasa dia ny Port Authority, Water Authority, Cayman Water Company, CUC, Sol Petroleum Cayman Ltd, Rubis Cayman Islands Ltd, Homegas Ltd, Ofreg, Cayman Brac Power and Light, Gas Gas madio, Refuel Ltd, Flow, Digicel, Logic ary C3
Hoy ny Governora:
• Mamporisika ny ankamaroan'ny mpiasa ao amin'ny toeram-piasan'i Cayman ny governemanta mba hijanona ao an-trano.
• Nakaton'ny Serivisy sivily ny ampahany betsaka amin'ny asany ary ireo navela hiasa an-trano mba hanaraka ny fepetra takian'ny Governemanta.
• Tsy misy porofo na inona na inona amin'ireo mpiasan'ny lalàna iray na roa nifanekena COVID-19; vaovao sandoka izany.
• Ny laharam-pahamehana momba ny dia maika ho an'ireo mila mandeha noho ny antony maika na mangoraka dia 244-3333.
Minisitry ny fahasalamana, Hon. Dwayne Seymour nilaza hoe:
• Folo andro tsy azo ihodivirana mandritra ny folo andro mba hanafohezana ny mety ho kilemaina amin'ny fihanaky ny COVID-19 eo an-toerana.
Ny Kaomiseran'ny polisy Derek Byrne dia nilaza hoe:
• Amin'ny alàlan'ny baiko voaray avy amin'ny Governora momba ny ora tsy ampoizina dia hampihatra izany ny Polisy mandritra ny 10 alina manaraka.
• Hampiasa fahiratan-tsaina ny polisy ary hampiasa ny hitsiny saingy hisy ny fampiharana henjana ny didy amin'ny curfew.
• Ny olona ajanona dia horaisina ny anarany sy ny adiresy raha te hanenjika izy ireo.
• Na dia hanao fomba fahitan'ny besinimaro aza ny Polisy, ny tsy fahazoana mivezivezy koa dia tsy pas maimaimpoana ho an'ireo olona handeha haka asa izay heverin'ny olona ho ilaina.
Ny sefon'ny UN dia namporisika ny mpitondra G20 handray drafitra COVID-19 'ady'
Ny Air New Zealand dia mampihena ny fahafaha-manao iraisam-pirenena hatramin'ny 95%